Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeSolomon Islands eziQhekezayo » Ezokhenketho iiSolomons zikhala ngokusweleka kweCEO uJoseph Tuamoto
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Iindaba zeSolomon Islands eziQhekezayo • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
I-CEO yeSolomons yoKhenketho uJoseph 'Jo' Tuamoto
Ebhengeza ezi ndaba zilusizi, Usihlalo webhodi yezoKhenketho iSolomons, uChris Hapa uthe iqela lesizwe labakhenkethi lonakele kukusweleka kwesithandwa sabo 'uBoso' obekwisikhundla se-CEO ukusukela oko wajoyina i-Solomon Islands Visitors Bureau kwi-2013.
Umphathi wezoKhenketho kwiSolomons, uJoseph 'Jo' Tuamoto osweleke eSuva, eFiji, ngoLwesibini, nge-21 kaSeptemba.
Umnumzana Tuamoto ebesandula ukubuyela eFiji ukuba asondele kusapho ngelixa ebesachacha emva kokugula.
Enye yezona mpumelelo ziphezulu zikaMnu Tuamoto zafika ngo-2018 xa wayephembelela inyathelo lokuphinda abuyisele iZiko leeNdwendwe laseSolomon Islands kwiKhenketho iSolomons.
Umzi mveliso osondeleleneyo wezokhenketho eSolomon Islands uselusizini kulandela ukusweleka kweCEO yezoKhenketho kwiiSolomons, uJoseph 'Jo' Tuamoto osweleke eSuva, eFiji, ngoLwesibini we-21 Septemba.
"Alithandabuzeki elokuba uJo ubenefuthe elikhulu kwishishini lezokhenketho laseSolomon Islands ngexesha lakhe apha," utshilo uMnu Hapa.
“Sibe nethamsanqa xa wamkela isicelo sokusijoyina ngo-2013, igama lakhe kwezokhenketho lommandla, ngakumbi igalelo alifumeneyo kwicandelo lezokhenketho laseFiji kwihlabathi liphela ngelixa i-CEO yezoKhenketho iFiji, ngaphezulu yena.
“UJo ushiya ilifa elikhulu. Ngexesha lakhe nathi, sibone icandelo lezokhenketho laseSolomon Islands likhula ngokucacileyo.
“Ezokhenketho namhlanje zinegalelo elikhulu kuqoqosho lwesizwe, kwixesha lobhubhane laphambi kwe-COVID-19 sabona ukwanda kotyelelo kumazwe ngamazwe ngokusondela kwiipesenti ezilishumi ngonyaka nokhokelo lukaJo ekudalweni kwentengiso eqhubekayo yamanye amazwe. Iphulo lilibonile ilizwe lethu elincinci ngoku linakanwa njengomdlali ophambili kwinqanaba lokhenketho lommandla.